जसपा बैठक जारी, अविश्वासको प्रस्तावबारे होला निर्णय ? - Everest Dainik - News from Nepal
जसपा बैठक जारी, अविश्वासको प्रस्तावबारे होला निर्णय ?
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को पदाधिकारी बैठक पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा जारी छ ।
बैठकमा नेताहरू महन्थ ठाकुर, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठ सहभागी छन् ।
बैठक समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भइरहेको छ । जसपामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारमा जाने÷नजाने विषयमा दुई धार छ । ठाकुर ओलीसँग सहमति गरेर जाने पक्षमा छन् भने यादव–भट्टराईले सम्झौता गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस जसपाले ओलीतन्त्रको घाककस खान्नः भट्टराई
दुई धार भएकाले नयाँ सत्ता समिकरणका लागि निर्णायक जसपा लामो समयदेखि अनिर्णित छ ।
भट्टराईनिकट स्रोतका अनुसार ओली सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा नेताहरु छलफलमा जुटेका हुन् । ‘ओली सरकारको विकल्प खोज्ने विषयमा नेताहरुमा छलफल गरिरहनुभएको छ । वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने जोड छ’, स्रोतले भन्यो ।
याे पनि पढ्नुस ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने जसपा ठाकुर–महतो पक्षको तयारी
जसपाले आज निर्णय गरे कांग्रेस माओवादीले भोलि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेका छन् । त्यसकारण जसपाको जारी बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्रीसरकारमा नजाने निर्णय गरेमा भोलि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना छ ।